Natiijada doorshada Norwey oo dhabaha u fureys Sverigedemokraterna - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Natiijada doorshada Norwey oo dhabaha u fureys Sverigedemokraterna
Ulf Bjereld: Socialdemokratiga Yurub xaaladu wey ku wado cakiran tahay
La daabacay tisdag 10 september 2013 kl 14.00
Natiijada doorashadii shaley ka dhacdey Norwey ayaa waxey kamicno noqon doontaa is-bedel xukumadeed oo ay asxaabta hantigoosiga ah xukunka kula wareegi doonaan. Waxeyna sidoo kale u muuqataa in xisbiga midigta mabaadiida fudud Fremskrittspartiet uu xukumadaas wasiiro ku yeelan doono.
Ulf Bjereld oo ah barofesar culuumta siyaasada ka dhiga jamacada Göteborg ayaa qaba in xisbiga Sverigedemokratiga ay faa'ido ugu jirta hadii xisbiga Fremskrittspartiet xubin ku yeesho xukumada soo socota ee Norwey.
- Iswiidhen xukumada Reinfeldt iyo Aliansen waxey ku guuleysteen in ay yareeyaan xisbiga Sverigedemokraterna oo aysan wax wado-shaqeyn ah la yeelan. Mar hadii xisbiga midigta Höyre ee dalka Norweyd uu hada doonayo xukun wadaag la noqdo Fremskrittspartiet taas waxey direysaa signal ah in aysan qatar sidaas ah la heyn wado-shaqeyn lala yeesho xisbiyada shisheeye iyo soogaooli naceybka siyaasadooda tahay, taasna waxaa dooda Iswiidhen ku faa'idaya xisbiga Sverigedemokraterna, oo waxey oran donaan fiiriya Norweyd Fremskrittspartiet xukumada ayuu kamid yahay maxaa anaga uga mid noqon karin xukumada Iswiidhen, ayuu yeri barofesar Ulf Bjereld.
Xisbiga Höyre ee dalka Norweyd oo ay walaalo la ah xisbiga Moderatka dalkan Iswiidhen ayaa doorashada Norweyd waxuu ka heley tiro codeyn oo gaaraya boqolkii 26. Hogaamiyaha xisbigas Erna Solberg ayaa hada noqon donta ra'iisalwasaarahii labaad oo haweeney ah oo soo mara dalka Norweyd. Waxaanse weli cadeyn sida xukumada Norweyd ee soo socata u ekaan doonto.
Barofesar Ulf Bjereld ayaa qabin in natiijada doorashada Norweyd wax saameyn ah ku yeelan doonto doorashada soo socota ee dalkan Iswiidhen. Halka olalhii doorashada Norwey laga fikrad qaatey dalka Iswiidhen, ayuu yeri.
- Hada doorashooyinka Iswiidhen waxaa ka dhiman mudo hal sanno ah marka ma qabo in wax saameyn ah ku yeelan doonto natiijada doorashada Norweyd. Halka la oran karo in sida ay siiyasada Iswiidhen u socoto saameyn ku yeelatey doorashada Norweyd. Olalahii doorashada Norweejiyaanka waxey ahaayeen kuwo ka shidaal qaadanayey dooda siyaasadeed ee dalkan Iswiidhen sannadyo badan ka socdey. Sida in xisbiyada hantigoosadka ah ay ku doorasho galeen kordhinta hantida guud oo qaaska loo yeelanayo, yarteynta canshuuraha sida Iswiidhen ka sameeyeen xisbiga bahwaddaga ah ee alliasen.
Inkastoo xisbiga shaqaalaha Norwey oo ah xisbi ay bahwadaag yahiin xisbiga Socialdemokratiga Iswiidhen heleen boqolkii 30 natiijada codadka hadana xisbigan iyo ganshaan-buurtiisa Senterpartiet iyo Sosialistisk Venstre oo mudo sideed sanno ah talada dalka hayey ayaa hada isku diyaarinaya la wareegista kaalinta mucaaradnimada. Ulf Bjereld waxuu qabaa in tani ay cadeyn u tahay in xisbiyada Socialdemokratiga Yurub yahiin kuwo hoos u sii dhacaya tas oo saameynteeda ku yeelan doonta Iswiidhen.
- Hadii fikradas noocaas ah maskaxda lagu hayo, Australiya waxaa ka dhacey mardhow doorasho xukunka looga tuurey xukmadii Socialdemokratiga aheyd. Waxaan heyn natiijada doorshada Norwey oo xukunka laga tuurey Socialdemokratigii talada hayey. Waxaan heynaa Jarmalka oo ay calaamado badan muujinayaan in Socialdemokratiga ay talada dhowaan hanan dooniin. Markaa waa iska cadahey in xisbiyada Sociademokratiga Yurub xaalado ku cakiran tahay kuligood, ayuu yeri Ulf Bjereld oo barofesar caluumta siyaasada ka ah jamacada Göteborg.